Zvinoenderana nemufananidzo uyu, iyo iPhone 7 Plus inosvika neAirPods | IPhone nhau
Nezuro, Nyamavhuvhu 31 tinoburitsa mufananidzo watingaone iwo unofungidzirwa mufananidzo wechimiti kubva mubhokisi re iPhone 7 Plus 256GB. Kunyangwe chiri chokwadi kuti vaive OnLeaks vakaburitsa uyu mufananidzo uye kuti iye pachake akataura kuti zvinogona kunge zviri zvekubiridzira, izvo zvinoita sezviri pachena pakutanga ndezvekuti iwo mufananidzo kana iwo uyo atumira Nhasi Apple Insider, svikiro rakagamuchira pikicha yemumwe munhu asingazivikanwe, inofanirwa kunge iri nhema.
Nei ndichiti ndinofunga mumwe wevaviri anofanira kunge ari manyepo? Zvakanaka, nekuti iyo yakaburitswa neOnLeaks yakaratidza kuti iyo 7GB iPhone 256 Plus yaizosvika neMheni EarPods, nepo iyo yakaburitswa naApple Insider nhasi wedzera chinyorwa "AirPods Wireless Nzeve"kureva AirPods isina waya nzeve. Kunyangwe paine zvakare mukana wechitatu unogona kutsanangura kuti mifananidzo yese iri yechokwadi.
Pachave paine yakasarudzika iPhone 7 inouya neAirPods?
Haisi yemusango mukana. Mufananidzo watakatumira nezuro wakati, pamusoro peMwenje EarPods iri kuverengerwa, inosanganisira an Lightning-Jack adapta. Mumufananidzo watinokuunzira nhasi hapana chakataurwa nezvakataurwa adapta. Kana ese ari maviri mapikicha ari echokwadi, Apple ichaita kuti isu tisarudze pakati peasina mahedhifoni kana maadapter izvo zvinotibvumidza kushandisa chero mahedhifoni atanga tichishandisa kusvika zvino. Kana zvirizvo, sarudzo iri pachena kwandiri.
Nguva dzose uchifungidzira kuti zvese zviri zviviri mifananidzo ndezvechokwadi, zvinoramba zvichionekwa pamutengo izvo zviviri zvinosanganiswa zvinotengesa. Kana ndichifanira kupa maonero angu uye ndichifunga nezve mitengo iyo yakaburitswa svondo rino, ndingati iyo yakajairika modhi -iyo 128GB Plus modhi inodhura € 44 yakaderera pane iyo 6GB iPhone 64s Plus- inosanganisira iyo EarPods MheniIpo modhi ine AirPods ichizotengwa zvakafanana neiyo iPhone 6s / Plus yaive ikozvino gore rakapfuura. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvinoenderana nemufananidzo uyu, iyo iPhone 7 Plus inosvika neAirPods
Hei !!! tarisa izvi: